Ngwaọrụ kachasị mfe na ntanetịime Web - Mkpuchi elu
A na-eji ngwá ọrụ weebụ achọta, nyocha ma wepu data site na saịtị dị iche iche. Imirikiti search engines na-eji data ndị a kpochapụrụ iji wepụta ibe weebụ ma chọpụta ihe net na-ekwu ugbu a. Maka ndị ọrụ na-abụghị ọrụ ọrụ, ọ na-esiri ike ịmata nke ihe nchọgharị weebụ kachasị mma. N'ụzọ dị iche, ndị na-eme nchọpụta ahịa na ụlọ ọrụ nchịkọta jikwa eji kọmputa na-eme ihe ntanetị na ngwa ngwa iji nweta ọrụ ha, enweghịkwa nsogbu ịhọrọ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị.
1. Ighapụta Hub:
Outwit Hub bụ Firefox tinye-na na nza nke ntinye data na ntanetị njikwa atụmatụ. Ọ na-eme ka ọchụchọ weebụ gị dị mfe ma nwee ike ịchekwa data amịpụtara na usoro kwesịrị ekwesị na a pụrụ ịdabere na ya. Ọ bụ Hubwit nwere interface enyi na-enwe ike ịmepụta ihe niile na nkeji. Ọ bụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị mma ma dị mfe na ịntanetị.
2. Bubata. :
Scraperwiki bụ onye na-ewu ewu na ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ewu na-abịa n'efu. Ọ na-enye data nchịkọta nke ọma ozugbo ma dị maka Linux, Windows, Unix na Sun Solaris. N'iji Scraperwiki, ị nwere ike ibudata faịlụ, foto, na vidiyo n'enweghị mkpa ọ bụla. Nkwado ndị nnọchiteanya na-adịkwa na ngwa ọrụ crawler a iji webata ọsọ na hụ nyocha.
Octoparse bụ ezigbo ike ihe ntanetị weebụ . Ọ bara uru maka ụdị data ọ bụla ma na-enweta ihe ọ bụla ziri ezi. Enwere ike iji okwute mee ihe iji wepu ebe nrụọrụ weebụ na ike ya na ọrụ ya. O nwere ụzọ ukwu abụọ (Ọdịdị di elu na Ọkachamara na ọnọdụ) ma dabara adaba ma onye mmemme na onye na-abụghị onye mmemme. UI ya na-pịa UI ka ị jide data gị n'ụdị ederede, HTML, na Excel ma budata ya na diski ike gị n'ime sekọnd abụọ.
Kimono bụ otu n'ime ihe kachasị mma ma dị mfe iji crawlers weebụ na net. Ị nwere ike iji ya dọka ọtụtụ saịtị na blọọgụ ma budata saịtị ahụ na diski ike gị. A maara ya nke ọma maka nyocha enyi ya. Ozugbo i bidoro Kimono, ị ga-enwe ike ịbanye na URL ma mee ka ịchọta data ịchọrọ iwepụ. Ọ ga-edebe data echekwara na nchekwa data ya ka ị nwee ike iji ya n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Kimono na-akwado ihe karịrị asụsụ 13 ma nye nkwado FTP n'aka ndị ọrụ ya.
Mozenda bụ oge a ma ama na ọtụtụ ọrụ na atụmatụ. Ọ na-enye aka maka ndị na-eme nchọpụta data, ndị ahịa ahịa dijitalụ, na ndị mmemme. Ị nwere ike mbupụ data gị gaa na mpempe akwụkwọ Google, Mozenda adịghịkwa adaba na mma. Ọ bụ ngwá ọrụ dị ukwuu maka ndị na-amalite na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị weebụ gị Source .